mweya yakasviba yefoni? uyu mutambo ndiwo wepedyo iwe waunogona kusvika kune iwo uye iwo & apos; s parizvino yakadzikiswa!
Kuru Nhau & Ongororo Rima Midzimu yenhare? Uyu mutambo ndiwo wepedyo iwe waunogona kusvika kune iwo uye iwo & maapos arizvino akaderedzwa!
Rima Midzimu yenhare? Uyu mutambo ndiwo wepedyo iwe waunogona kusvika kune iwo uye iwo & maapos arizvino akaderedzwa!
Animus - Mira Woga RPG / slasher (Mweya-yakafanana) $ 1.99 ios : Android
Iko & apos; iyi yakasarudzika mhando yemitambo iyo yatinodaidza kuti 'Mweya-yakafanana'. Pamusoro, ivo vanongova RPG mune yekufungidzira marongero maunodzora gamba-rinoshandisa gamba iro & apos; s irikukwikwidzana nezvinotyisa. Nekudaro, akateedzana ane zita reMweya Yemweya akatora nyika yekutamba nedutu nemubatanidzwa wezvishamiso, zvakasviba, zvemuchadenga kutaura nyaya, makanetsi ekurwisa, uye yakaoma, yekuranga kuoma.
Zvese izvi zvakazadzikiswa nesarudzo yakanaka kwazvo yeupambi uye zvinhu izvo munhu aanogona kuwana, aine anotaridzika-anotaridzika magiya achidonha kubva kune vakaoma, vakuru vakaoma.
'Haungambove nemutambo wakadai pane nhare', tinonzwa iwe uchitaura.
Zvakanaka ... ngatipei Animus - Mira Woga. Chinyorwa che mobile-chete (chinowanikwa kuApple neIOS) icho chiri chaizvo, chakasviba Mweya-yakafemerwa. Izvo & apos; kwete kuti uzvitaure & apos; sa copycat, hongu - mutambo une yayo nyaya uye iwo & maapuro ayo seti yedrab, inoodza nzvimbo kwaunofanirwa kurwira toni yemadhimoni anotyisa uye maboss anogona kukucheka pasi mu single swing.
Iwe & apos; iwe une kujairika kunzvenga, kuvharira, uye kusvetuka sisitimu kubva kuMweya-senge mitambo, pamwe nehutano uye nesimba mabara, chero ayo iwe ausingatombo nyatso kuona ayo apera! Dhizaini dhizaini yemutambo inoshamisa chete, kubva kuchinjika, kurova zvisimbiso, kune epic soundtrack iyo inongokukwevera mukati. Mifananidzo, iyo & apos; inonakidza kwazvo, futi. Chokwadi, nharembozha haisati iri padanho rekunyaradza, asi ivo vanogadzira vakakwanisa kusvina chero chavaigona kubva kumidziyo yedu yakabatwa uye mutambo unoratidzika wakanaka.
'Iwe haugone kutamba mweya-senge ine yekubata skrini!' tinonzwa iwe uchiti. Huye, Animus - Mira wega inowirirana neanodzora - zvese paApple uye iOS. Iyo & apos; zvakare yakadzikiswa izvozvi - pasi kusvika kumadhora maviri kubva pamutengo wayo wakasarudzika wemadhora masere! Saka, enda kumberi - isa bhurugwa rako rekuyedza uye upe iyi spin!
Animus - Mira Woga
ipad mweya 4 skrini inodzivirira
Samsung Galaxy S8 Active inosvika kuUS svondo rino, haizove AT & T yakasarudzika nekusingaperi
10 makuru mafoni enesikirini pasi pe5 masendimita aunogona kutenga izvozvi
Nguva Warner app inounza mhenyu TV kune iyo iPhone uye iPad
Google iri kugadzira Android vhezheni yeApple & apos; s Tsvaga netiweki yangu?
Tarisa uone izere mazita (s) eCostco Nhema Chishanu 2020 madhiri
Maitiro ekuchinjisa mafoni uye makarenda kubva kune Android foni kuenda kune iPhone
Spotify pakupedzisira inowedzera chinongedzo chakakumbirwa-refu kune yayo Android app ine mashoma fanfare
Embold - An AI Yakavakirwa Software Analytics Platform